Waa Kuwan Wadamadii Erdogan Uu Ugu Mahadceliyey Arintii Dabka | Xaqiiqonews
Waa Kuwan Wadamadii Erdogan Uu Ugu Mahadceliyey Arintii Dabka
Dabkan oo ka kacay keymaha koonfurta Turkiga kaasi oo burburiyey magaalooyin ay ka mid yihiin Antalya iyo Muğla ayaa dhanka kale sababay dadaalo maxalli iyo kuwa caalami ah oo lagula dagaalamaaya dabka.
Gudaha Turkiga, dadweynaha ayaa u midoobay la dagaalanka dabka, dadka qaar ayaa dhalooyin biyo ah kaga qeyb qaatay dadaalka halka kuwa kalane ay bixiyeen wixii ay kaga qeyb qaadan karaan la dagaalanka dabka.
Dowladda Turkiga ayaa bixisay lacag dhan $2.7 Milyan oo doolar taasi oo u dhiganta 23.5 Milyan oo lacagta Liirada Turkiga, si loo caawiyo dadkii iyo xaywaanadii ku wax yeeloobay musiibada.
Sidoo Kale Aqri: Erdogan Miyuu Gacanta Ka Shumiyey Biden!
Madaxweynaha Turkiga Raji Deyib Erdogan ayaa khamiistii mahadcelin u jeediyey wadamadii turkiga gaarsiiyey kaalmooyinka iyo wadamadii muujiyey sida ay uga xunyihiin musiibada.
Erdogan ayaa u mahadceliyey wadamo ay ku jirto Soomaaliya kuwaasi oo Turkiga ku garab istaagay daminta dabka.